★မြန်မာ့အလင်း★: 54 killed as suicide bomber targets Shiite pilgrims in Iraq
နှစ်စမှာ ကုလားတွေ သတ်ကြ.. သေကျတာ ကျုပ်တို့ပြောပြီးခဲ့ပါပြီ။ Februaryလ ရဲ့ ပထမဆုံးရက်မှာ အီရတ်မှာ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အစဉ်အလာနဲ့အညီ ပိုးဆိုး ပက်စက် သေကြပါတယ်။ ကုလားတွေ သေတယ်ဆိုတော့ . . . . တခြားဘာသာဝင်တွေ လက်ချက်လို့ အထင်မမှားပါနဲ့။ သူတို့အချင်းချင်း သတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ပြောသလိုပါပဲ… မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ဒေသမှာ တခြားဘာသာမရှိဘူးဆိုရင် . . နွားကိုသတ်ပါတယ်။ နွားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့အချင်းချင်းသတ်ပါတယ်။ 54ကောင်သေပြီး 109 ကောင် မသေမရှင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ သူတို့ရဲ့ထုံးဆန်အတိုင်း သေတော့လည်း ခွေးလို ၀က်လိုပါပဲ။ ကဲ.. ကဲ.. မွတ်ဆလင်တွေ အချင်းချင်းသတ်ရင်း ကုသိုလ်ယူပုံသတင်းကို ဖတ်ပြီး ကြည်နုူရအောင်။
The attack, which echoes oneayear earlier, occurred inahospitality tent for Shiite Muslims making the walk to the shrine city of Karbala. Iraqis fear even worse as March elections draw near.
Reporting from Baghdad - A female suicide bomber detonatedavest rigged with explosives amongacrowd of Shiite Muslim pilgrims Monday in northeast Baghdad, killing 54 people and wounding 109, the latest inastring of attacks that have unnerved the city as pivotal elections loom next month.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:13 AM
အသိတရားမရှိတဲ့ ဒီဘလောက်ပိုင်ရှင် နဲ့ ကတုံးးလူပျင်းနဲ့ ဗမာ သူခိုး လူလိမ်တွေ ခင်ဗျား
မင်းတို့ ဘာသာက အရမ်းမွန်ုမြတ်တယ်လို့ ပြေားနေရအောင် မင်းတို့မှာ အသိတရားဒီလောက်တောင် ခေါင်းပါသလာ
မင်းတို့တွေကို မေးစရာရှိတယ် ဒါတွေ ကို သေချာ စဉ်းစား ပြီးဖြေ
၁။ မင်းတို့ ဗမာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် ဘုရား ဆိုတာရှိလာ
၂။ မင်းတို့ဘုရားက ဘယ်က လဘယ်က လာတာလည်။
၃။ ကိုယ်ကွယ်စရာမရှိလို့ အရေကြီး ကျာကူ လီ ကောင်တွေ မင်းတို့ အမေတွေ အမတွေ ကိုယ် မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ဆက်သနေရလို့ မခံနိုင်လို့ အခြား ကိုးကွယ် စရာရှာတာ ဘာကြောင့်လည်
၄။ ဗမာတွေမှာ ကိုးကွယ်စရာမရှိလို မွန်တွေဆီကနေ ဘုရားဓာ ပနာပါ မကျန် ခိုးယူတာ ဘယ်သူတွေလည်။
၅။ ဂေါးတမက မင်းတို့ကိုယ် ငါဘုရားပါလို့ ပြေားဖူးလာ။
၆။ ဂေါးတမ လူမဖြစ်ခင်က လူတွေ ဘာကိုယ် ကိုးကွယ်ကြလည်။
ရ။ နီပေါး မှာ ရှိတဲ့ လူတွေက ဘာလို့ ဂေါးတမကို မကိုးကွယ်ကြလည်
၈။ မင်းတို့ ဂေါးတမက ဘာလူမျိုးလည်
၉။ ငါတို့ ပါတီအာဏာရရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒဘာသာ နိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင် ပေးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူပြေားခဲ့ လည် မင်းတို့သိလာ
၁၀။ WORLD မှာ မင်းတို့ ဗမာတွေ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိလည်းမင်းတို့သိလာ
၁၁။ WORLD မှာ BUDISH နိုင်ငံ ဘယ်နှစ်နိုင်ငံ ရှိလည်။
၁၂။ BUDISH နိုင်ငံ အနည်းငယ်သာ ရှိသည့်အနက်မှ မင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဗမာတွေက အယုတ်မာဆုံးဆို မင်းတို့ငြင်းမလာ။
၁၃။ မင်းတို့ ကတုံးလူပျင်းတွေ လူတွေအရှေ့မှာ သူတော်ကောင်း အယောင်ဆောင်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ သူများသားမယား သမီးပျိုတွေကို ဒီနေတိုင် ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတာ မင်းတို့ငြင်းမလာ
၁၄။ ဒီနေ့ ဒီခောတ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကတုံးကောင်တွေ မိန်းမအကြီးတွေကို နှိပ်ခိုင်းတယ် သူများ မယားတွေကို နှိပ်ခိုင်းတယ် ဇိမ်ယူတယ် ဒါတွေက သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်လာ
၁၅။ မင်းတို့ရဲ့ အမေတွေ အမတွေ နှမတွေ အဒေါ်တွေ ကတုံးကောင်တွေ နဲ့မအိပ်ဖူး ဘူးလို့ မင်းတို့ပြေားနိုင်မလာ
၁၆။ အတိအကျ ပြေားရလျှင် မင်းတို့ရဲ့ ကတုံးကောင် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် မင်းသမီးဘယ်နှစ်ရောက်နဲ့ အိပ်ခဲ့လည် သူရဲ့ တပည့်အရင်း ဦးဇင်းဘလူး ဘာတွေလုပ်ပေးလည် ဘယ်နှစ်ရောက်ကို ခေါ်ပေးလည် ဒါတွေကို မင်းတိုကသိလာ
၁၇။ မင်းတို့ဗမာတွေ ကုလားတွေရဲ့ ကျိန်စာ မိနေတယ်ဆိုတာမင်းတို့ သိလာ။ ဘာကြောင့်ဒီမေးခွန်းကိုမေးရလည်းဆိုရင် ကုလားတွေကိုယ် မင်းတို့ မုန်းသလောက် ဒီကနေ့ မင်းတို့တတွေ ကုလာကိုယ် ရှိခိုးနေရတယ် ကုလားကိုယ် ကိုးကွယ်နေရတယ် ကုလာတွေဆီမှာ မင်းတို့တတွေ ကျွန်ခံနေရတယ် မင်းတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဂေါးတမက ကုလားဆိုတာ မင်တို့ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလာ ဒါတွေအားလုံးက ကုလားတွေက မင်းတို့ကို ကျိန်ထားတဲ့ ကျိန်စာတွေဘဲး
မင်းတို့တွေကို သိပ်မမေးချင်တော့ဘူး သနားတယ် မေးတာများရင် မင်တို့တတွေ ကတုံးတွေကိုယ် လိုက်သတ်နေအုံးမယ်
မင်းတို့ရဲ့ ဘာသာက အမှန်တရားဆိုရင် ဒီ COMMENT ကို မဖျက်ဘဲးထားပေါ့ လူလိမ်ဘာသာဆို ဖျက်ပေါ့
မကျေနပ်ရင်ဒီကိုလာခဲ့ ထပ်ရှင်းပေးမယ် hapmalaysia@gmail.com